Izay nesorina no tiana haverina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Zava-droa loha no votoatin-dresaka eny anivon’ny fiaraha-monina eny tao anatin’ny andro vitsivitsy amin’izao faramparan’ny volana febiroary izao.
Andaniny, ny resaka “insécurité” etsy sy eroa. Tena manjaka ny tsy fandriampahalemana. Saika isak’alina dia misy vaky trano eny amin’ny fokontany maro mba tsy ilazana hoe ny fokontany tsirairay.
Ankilany, nahazo laka ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny olom-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ity farany ity no hitafatafantsika anio e.
Tsiahivina fa ny zoma 21 febiroary no nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny filohan’ny Tetezamita teo aloha. Tamin’ny alina no nanaovany izany valan-dresaka izany. Voatery tsy maintsy nihaino azy ireo manana vaovao amin’io fotoana io ary mampita io alina io, na ampahany ihany aza, izay ventin-kevitra nampitainy. Mba tsy hanao “ratage” araka ny filazan’ireo mpilaza vaovao.
Feno tanteraka ny toerana fandraisana olona tao amin’ity hotely nanaovana ny “conférence de presse”. Feno an’ireo mpikatroka ao anatin’ny MAPAR. Lasa fomba fanaon’ny olona maro indrindra ireo mpanao politika ity manao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ka feno mpanohana ny toerana hitafatafana. Ohatra, nanao izany Ratsiraka. Mila tsy ifandrenesana ny horakoraka amin’izay fotoana izay. Ahitana fa misy sinema ao.
Dia nasehon’i olom-pirenena fa mahay sinema izy. Nanao fomba fitenin’ny mpanao politika vehivavy i Rajoelina nanatsafa ilay mpanao politika miaro ny tontolo iainana. Nanao fitenin’ny olon’antitra ihany koa raha nilaza fa amin’ny 2018 ny “rendez-vous”. Nampiseho havinirana raha nilaza momba ny filoha izay notohanany. Hainy io. Tahaka ireny olona nianatra teatira ireny ny tenany.
Ny tonga ao antsaina raha mijery ny fomba nofinidin’ny olom-pirenena Rajoelina nanazava ny heviny dia tahaka ireny izy niverina avy any Afrika ireny ka nisy nosoniaviny tany ary dia notsipahiny. Ny vahoaka no nalainy ho namana. Eto indray dia tahaka izany. Ny mpikambana sy mpanohana MAPAR no nalainy ho namana hitsipahany ny toeran’ny praiminisitra.
Dia manao tahaka azy koa ireo mpitantana ny MAPAR raha toa ka nanambara ny anaran’ny PM nasolo an’i Rajoelina. Efa nalefan’izy ireo tany amin’ny Prezida ilay anarana fa na izany aza dia avy hatrany dia navoaka ho fanta-bahoaka. Fomba fiasa tsy tena mifanaja loatra izany. Raha tena tsy maintsy natao dia tokony ho tany amin’ny Antenimieram-pirenena no nanao izany ny MAPAR satria ao amin’ny Antenimiera no manolotra azy fa tsy andalambe na vory vahoaka.
Izay ny endrika ivelany. Raha fehezina ny nambaran’ny olom-pirenena Rajoelina dia nilaza izy fa tsipahiny ireo Birao nasionalin’ny MAPAR izay nanolotra ny tenany ho Praiminisitra. Mangataka io Birao Nasionaly io izy hanendry olon-kafa indray.
Dia nivory tokoa ilay Birao Nasionaly ary namoaka anarana. Nambara ampahibemaso indray izany anarana izany ny alatsinainy 24 febiroary teo nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety.
Ny olana eto dia ny finiavana tsy hamaha olana. Olona efa teo nandritra ny 5 taona nisian’ny Tetezamita ity natolotra ho praiminisitra ity. Olona tena akaikin’ny filoha Rajoelina. Milaza mazava izany ny olom-pirenena Rajoelina fa te hitantana ny tohin’ny tantaram-pirenena fa tsy ho mpitazana fotsiny ihany izy.
Ny lafiny mahatsara ny maha praiminisitra olona teo nandritra ny 5 taona dia mitohy ny asa. Tsisy loatra ny fisalasalana. Efa samy tao anatin’ny Tetezamita izany ny filoham-pirenena sy ny PM.
Ny lafiny ratsy anefa no ho betsaka. Ho olana ny fisian’ny aloky ny filohan’ny Tetezamita izay mieloelo ao. Olana ihany koa ny vesatra amin’ny fahitana ny MAPAR hatrany amin’ny Antenimiera ka hatreo amin’ny governemanta.
Olana faharoa ny fahitana fa mampiseho mivantana ny MAPAR fa vonona ny hifanenjana amin’ny HVM na ny PMP, Plateforme de la Majorité Présidentielle, ny MAPAR.
Ny Lalam-panorenana dia mametraka loha roa eo amin’ny fahefana mpanatanteraka. Ny zava-misy ankehitriny dia hisy loha telo ao izany ny Filoham-pirenena, ao ny Governemanta, ary ny fahatelo dia any amin'ny toerana misy ny fiasan’i Andry Rajoelina. Ho lasa lapa vaovao izany toeram-piasany izany.
Tsy azo hadinoina koa ny filohan’ny mpanohitra. Izay mbola tsy fantatra. Ho hery hafa koa io.
Dia manahirana tokoa ny mitazana an’ireto mpanao politika malagasy ireto.